Xarunta Qorista Dugsiga Sare ee Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Taageero kale oo weyn waa Xarunta Qorista MHS. Xarunta Qoraalku waxay u furan tahay barashada isku dhafan! Waxaa ka shaqeeya laba macallin oo Ingiriis ah iyo 40 tababarayaal qorista ardayda ah, Xarunta Qorista waxay u furan tahay dhammaan ardayda MHS. Ardaydu waxay helayaan warcelin ku saabsan qorista nooc kasta, dhammaan maadooyinka, iyo marxalad kasta oo ay tahay habka qorista, min fikirka maskaxda ilaa dib u eegista ugu dambeysa. Dhammaan qorayaashu waxay ka faa'iideystaan la wadaagga shaqada hawsha horumarka leh akhristayaasha aqoonta leh, ee u fiirsanaya. Waxaan ardayda kala shaqeynaa 1: 1 mashruuc kasta oo qoris ah, marxalad kasta oo horumar ah, tababarid adigoo weydiinaya su'aalo, soo jeedin xeelado, iyo ka caawinta qorayaasha inay caddeeyaan fikradaha.
Waxaan hadda haysannaa koox cilmiga sayniska ah! Baro sida loo sameeyo ballan, la ogaado tartamada qorista iyo fursadaha kale, iyo baalashada maktabadda agabyada qorista.
Ku soo biir Kooxdayada cilmiga
Xarunta Qoraalka waxaa hibeeyay Mu'asasada Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan qorista shirarka
Qoritaanka talooyinka iyo ilaha
Xarumaha wax lagu qoro ee adduunka
Ayaa ila kulmi doona?
Shaqaalaha Xarunta Wax Qoraalka (WC) iyo tababarayaasha ardayda ayaa si wanaagsan loogu tababaray inay dhagaystaan, hagaan, waydiiyaanna su'aalo kaa caawin doona inaad hagaajiso warqaddaada. Waxaa lagugu wehelin doonaa tababare ugu yaraan kaa hooseeya heer fasal, ama waxaad codsan kartaa inaad la kulanto xubin shaqaale ah. Dhamaan waayeelka waxay la kulmaan shaqaalaha WC.
Goorma ayaan soo dhici karaa?
Inta lagu jiro saacad eber ah, qado, ama dugsiga kadib. Waxaa laga yaabaa inaadan ka maqnaan fasal aad ku timaado Xarunta Qoraalka mooyee inaad ka hesho baasaboor macallinkaaga mooyee.
Maxaa dhacaya inta lagu guda jiro shirka qoraalka?
Waxaad la timid shirka adoo wata fikrad cad oo ah waxa aad rabto inaad ka shaqeyso, tababaraha laguu xilsaaray ama xubin ka mid ah shaqaalaha ayaa ku weydiin doona su'aalo waxayna soo jeedin doonaan talooyin. Haddii aad hadda bilaabeyso, kulanka waxaa lagu qaadanayaa fikirka fikirka ama ka doodista abaabulka. Haddii aad qabyo qoraal tahay, waad ka gudbi doontaa hawshaada oo waxaad isla wadaagi doontaa rubric, ka dibna ka hadal siyaabo aad ku horumarin kartid warqaddaada. Haddii aad diyaar u tahay inaad keento warqad, tababarahaaga ayaa kaa caawin doona inaad dib u akhrido. Cashar walboo dhan, qor qoraalo si aad dib dambe ugu sameyn kartid dib u eegis.
Ilaa intee in le'eg ka hor ayaan jadwal u sameeyaa tababaraha WC?
Maalmo ka hor inta aan la gaarin warqaddaada, haddii ay suurogal tahay. Ardayda qaarkood waxay jadwalaan ballamaha mustaqbalka maalinta warqad loo qoondeeyo; Tani waxay kaa caawineysaa inaad hubiso inaad qori doontid qabyo qoraal ah oo aad waqti u heysato inaad wax ka beddesho ka hor taariikhda la filayo. In kasta oo tababarayaashu ay kula shaqeyn karaan maalinta warqaddaadu dhacdo, waxaa laga yaabaa inaadan haysan waqti badan oo aad dib-u-eegis ugu sameyso sidaa darteed horay u sii qorshee!
Ka waran haddii aanan ka fikiri karin qaab aan ku bilaabo qorista? Ma u baahanahay inaan keeno qabyo qoraal ballanta?
Keen shaqada ama dardargelinta, iyo sidoo kale wixii buugag ama qalab ah ee la xiriira, tababarahaaguna wuxuu kaa caawin doonaa inaad horumariso fikradahaaga ama aad ugala hadasho jawaabta.
Tababarahaygu miyuu dib u akhrin doonaa ama wax ka beddeli doonaa waraaqda?
Tababarahaagu kuuma akhriyi doono adiga, laakiin wuxuu kaa caawin doonaa inaad adigu sameyso adoo muujinaya qaab aad ku hagaajin karto. Haddii aad qabtid su'aalo gaar ah oo ku saabsan xigashooyinka, adeegsiga, xarakaynta, iwm. Tababarahaaga ayaa ka jawaabi doona oo qaabayn doona sida wax looga qabto arrinta inta lagu gudajiro warqaddaada oo dhan. Tababarahaagu sidoo kale wuxuu ku siin karaa gacan-qabsi waxtar leh ama ilaha internetka.
Shaqaalaha Xarunta Wax Qoraalka iyo ardayda la xidhiidha waxay isu arkaan inay yihiin tababarayaal qoraal. Waxay siiyaan hagis shaqsiyadeed iyo istiraatiijiyad loogu talagalay qorayaasha markay ka shaqeeyaan waraaqaha tacliinta, qoraalada kulliyadda, ama qorista shaqsiyeed.
Macallimiinta loo magacaabay tababarayaasha qorista ardayda ayaa ka shaqeeya Xarunta Wax Qoraalka ka hor iyo ka dib dugsiga, iyagoo la shiraya ardayda isla markaana maareeya miiska hore. Waxay sidoo kale booqdaan fasallada si ay uga caawiyaan qorista mashaariicda, latalinta ardayda dugsiga dhexe, ka caawinta dhacdooyinka tayeynta, iyo doorka hoggaamineed ee dabaaldeggeena sannadlaha ah ee guga, "Off the Page." Booqo Xarunta Qoraalka si aad u aragto astaamaha tababarayaashayada ardayda ee hadda jira!
Shaybaarka Qorista ee 'Purdue Online'
Wax kasta oo aad waligaa dooneysay inaad ka ogaato qorista waxay isugu uruureen hal meel! Ka hubi tan wixii caawimaad ah ee laga bilaabo wax kasta oo aad bilaabi karto iyo inaad ku nadiifiso warqaddaada ugu dambeysa. Waxa kale oo ay leedahay talooyin faahfaahsan, edbin gaar ah oo edbin ah.
Jaamacadda Waqooyiga Carolina ee Qorista
Xidhiidhyo badan oo kaa caawin doona inaad qorto maqaal ku saabsan mawduuc kasta.
Jaamacadda qoraaga 'Richmond' Webka
Xiriirinta iyo tilmaamaha kaa caawin kara marxalad kasta oo ka mid ah warqaddaada.
Machadka 'Macalester College' ee qorista Well Well
Ururinta 60 fiidiyow oo labaad oo ay bixiyeen xubno katirsan macallimiinta Macalester. Filim lagu duubay "goobta," muxaadarooyinkan yar ee qosolka iyo wax ku oolka ah waxay wax ka qabtaan arrimaha sida "Waa maxay teesar?" iyo "Dilka falka inuu ahaado."
Kuwa Fiican, Kuwa Xun, Iyo Kuwa Xun: Qiimaynta Ilaha Shabakada
Vocab Madadaalo ee Bariiska Bilaashka ah: Guji qeexitaanka saxda ah, sax, oo quudiso kuwa gaajaysan.
Hal Fiiri: Hooyada Dhamaan Qaamuusyada!
Xiriirinta qeexitaanka dhowr qaamuusyo lagu kalsoon yahay. Ma helin ereygii saxda ahaa? Dhagsii “Qaamuuska Diidmada” ee bogga dushiisa waxayna kaa caawin doontaa inaad hesho ereyga aad raadineyso.
Adeegso tilmaamahan qoraalka ah ee ka socda Golaha Qaranka ee Macallimiinta Ingiriiska si aad ugu dhiirrigeliso ardaydaada inay wax badan qoraan oo ay si fiican wax u qoraan.
Erayada Dagaalka | Dublin, Ireland
Qoraa Roddy Doyle wuxuu xaruntan magaaleed u bilaabay qorista hal abuurka.
826 Xarumihii Qorista | Toddoba goobood oo ku yaal Mareykanka (Boston, Chicago, Los Angeles, Michigan (Detroit / Ann Arbor), New York City, San Francisco, Washington, DC
Qoraaga iyo qoraaga qoraaga, Dave Eggers, waa maskaxda cajiibka ah ee ka dambeysa xarumahan qorista dadweynaha. Dhammaan waxay leeyihiin umeerin bilaash ah, aqoon isweydaarsiyo hal abuur leh iyo dhacdooyin, iyo buugaag ardaygu abuuray. Dhammaan mutadawiciintu waa qorayaal xirfadlayaal ah.
Maxaa Ka Dhaca Xarunta Qoraalka? ka socota Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee Vimeo .
Eeg Muqaal si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
Eeg Websaydhka Qorista LibGuide